दिपकराज गिरि लेख्छन् – मनिषा र सरिता, यताकी छोरीले यतैको गाइन, उताको छोरीले उतैको – Butwal Sandesh
दिपकराज गिरि लेख्छन् – मनिषा र सरिता, यताकी छोरीले यतैको गाइन, उताको छोरीले उतैको
काठमाडौं। कलाकार दीपकराज गिरीले कालापानीबारे दिएको अ,भिव्यक्तिले वि’वादमा तानिएकी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गिरीलाई व्यं,ग्य गरेका छन्। सरिता गिरीलाई नदीको संज्ञा दिँदै दीपकले उल्टो बगेको नदीबाट सुल्टो आश गर्न आह्वान गरेका छन्।
सरिताको शाब्दिक अर्थ नदी हो!! सबै नदीहरू नेपाल हूंदै भारत तिर बग्ने गर्दछ तर हामि कॉहा एउटा यस्तो नदी छ जो भारत हूंदै नेपाल तिर उल्टो बगेर आएको छ जो आफै उल्टो बगेको छ उसबाट सुल्टो किन आश गर्ने …..मनिषा र सरिता…….यताकी छोरीले यतैको गाइन, उताको छोरीले उतैको !!!
भारतले अ’ति’क्र’मण गरेको लिपुलेकसहितको नेपाली भूमी फिर्ता ल्याउनु पर्ने माग उठिरहेको बेला जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले भारतको पक्षमा अभिव्य’क्ति दिएकी छिन् । उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने प्रमाण नभएको बताएपछि अहिले उनको चौतर्फी विरो’ध भइरहेको छ । उनले निरन्तर राष्ट्रिय हित र सीमानाको सुरक्षाविपरित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै जतातै वि’रोध भइरहेको छ । उनले रा’ष्ट्रवि’रो’धी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै का’रवाहीको माग समेत गरिएको छ।
उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई अहिले सामाजिक सञ्जालभर वि’रोध गरिएको छ । यस्तै नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री नीता ढुंगानाले पनि गिरीलाई नेपालको लायक नभएको बताएकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नारीलाई आफ्नै माइती नै प्यारो हुने हुनाले उनले उतै राजनीति गर्दा राम्रो हुने बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन् – ‘हो नारीलाई आफ्नै माइती नै प्यारो हुन्छ । उतै गएर राजनीति गर्दा कसो होला ? तिमी नेपालको लायक छैनौ।’